Ogaden News Agency (ONA) – OYSU UK oo Speaker Corner ka qudbadeeyay Warqadona ka qeybiyay Magaalada London
OYSU UK oo Speaker Corner ka qudbadeeyay Warqadona ka qeybiyay Magaalada London
Posted by ONA Admin	/ June 16, 2013
Ururka Dhalinyarada OYSU UK ayaa u baxay olole ay ku tageen Bartamaha magaalada London maalinimadi Sabtida 15/04/2013. Ololahan waxaa soo fuliyay laba kooxood oo kamid ah OYSU UK iyaga oo Qeybo kamid ahi aadeen Xarunta Caanka ah ee Speaker Corner oo ah goob ay siyaasiyiinta wadankan Ingiriisku kasoo jeediyaan qudbado halkaas oo lagu doodo afkaarahana la isku weydaarsado. Sidoo kale Waxaa qeybta labaad ay u baxeen xarunta weyn ee Trafalgar Square oo ah Xarunta ugu weyn wadankan boqortooyada Ingiriiska oo ah goob caan ah oo dadka ugu tiro badan isugu soo baxaan.
U jeedada Ololahan waxaanu Wareysi kooban kala yeelanay Xoghayaha OYSU Mudane Mustafe Xaaji Diirane oo noogawaramay Socdaalkan ololaha lagu qaaday Magaalada London. Xoghayaha ayaa sheegay in u jeedada olalahan yahay abaabul la rabo in lagu gaadhsiiyo Qadiyada Ogadeniya bulshada qowmiyahada kala gadisan ee ku nool wadanka UK iyo haayadaha dowliga ah iyo kuwa u ololeeya arrimaha bani aadamka intaba.
Kooxdii Speaker Corner aaday waxay soo bandhigeen Qudbado ay kasoo jeediyaan mafalaxan caanka ah iyaga oo ka hadlayay dhibaatooyinka soo gaadha shacabka Somalida Ogadeniya iyo waxyeelada ay muwacawamada lasiiyo Ethiopia gaadhsiiso shacabkaas.
Sidoo kale team-kan waxa uu kusoo bandhigay Hyde Park oo ah meesha uu Speaker Corner ku yaalo hiddo iyo dhaqanka Somalida Ogadeniya iyaga oo halkaas kusoo bandhigay ciyaaraha ay kamidka yihiin Dhaantada.
Isusoo baxan dhalinyaradu kuwareegaysay magaalada London waxa kale oo uu ka dhacay Xarunta weyn ee Trafalguar Square halkaas oo ay ka qeybiyeen warqado gaadhaya 5,000 warqadood oo ay ku qoranyihiin xogtii ugu danbeeysay ee dhulka Somalida Ogadeniya iyo gumeysiga waxyeelada uu ku hayo shacabkaas xoriyad doonka ah.
Waxaa kale oo warqadahaas ku jiray Petition lagaga codsanayo muwaadiniinta wadankan boqortooyada Britain in ay si dag dag ah ula xidhiidhaan masuulkooda u qaabilsan Baarlamaanka islamarkaasna ay ka codsadaan in Dowlada Britain jawaab ka bixiso lacagaha deeqda ah ee lasiiyo Ethiopia ee loo isticmaalo siyaasada iyo militariga sida sharci darada ah loogu gumaado dadkii loogu talo galay in mucaawamadan lagu badbaadiyo.
Ururka OYSU London ayaa olole joogta ah kawada wadanka Ingiriiska iyaga oo Barnaamijyadi ugu danbeeyay ay qabteen Bishan uu kamid ahaa.
Ururka oo booqasho ku tagay Magaalada Birmingham 01/06/2013
Ururka oo Haayado lakulmay 08/06/2013
Ururka oo Speaker Corner iyo Trafalquar Square ku qabtay Barnaamijyo 15/06/2013
Sidoo kale Ururka ayaa barnaamijyo kale u qorsheysanyihiin aakhirka bishan June 22 -29 June 2013. kuwaas oo ka dhici doonaan banaanka magaalda London.